Guddiga Doorashada oo shaaciyay Xildhibaanada la doortay ay ku filan yihiin kooramka Baarlamaanka +Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Guddiga Doorashada oo shaaciyay Xildhibaanada la doortay ay ku filan yihiin kooramka Baarlamaanka +Cod
Guddiga Dooarashooyinka dadban ee dalka ayaa shaaca ka qaaday Xildhibaanada cusub ee ilaa hada la doortay inay yihiin kuwa ku filan Kooramka loogu talo galay inuu ku furmo fadhiga Baarlamaanka Somaliya.
Sida sharciga ah Kooramka Baarlamaanka waxa uu ku furmayaa tirada Xildhibaanada ee gaaraysa 184 Xildhibaan, Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka dadban ma uusan shaacin tirada Xildhibaanada la doortay, balse wuxuu sheegay inay yihiin kuwa ku filan Kooramka.
Abukaate Cumar Cabdulle (Dhagey) oo goor dhaweyd Saxaafadda kula hadlay Xarunta Gaadiidka Booliska oo ay ka socoto Doorashada Xubnaha Aqalka hoose ee Beelaha Banaadiriga, ayaa wuxuu shaaca ka qaaday saddex dalool labo dalool in la doortay.
“Maanta tirada Golaha shacabka ee la doortay waxa ay gaarayaan saddex dalool labo dalool oo ah tiro ku filan in Baarlamaanka uu ku fariisan karo, inkastoo ay inoo dhiman yihiin Gobolada Waqooyi, sidoo kale waxa ay maalin weyn maanta u tahay in Doorashadii ugu horeysay ay ka dhacdo Caasimada dalka.” Ayuu yiri Abukaate Dhagey.
Inkastoo weli ay socdaan Doorashooyinka la xiriira Xubnaha Aqalka hoose ee dalka, hadana Guddiga wuxuu shaaciyay in tirada la doortay ay yihiin kuwa kooramka ku filan.
Maamulka Baarlamaanka ayaa xalay ugu yeeray Xildhibaanada cusub inay isugu yimaadaan xarunta Villa Hargaysa oo uu ka dhici doono kulankii ugu horeeyay ee Xildhibaanada.